Rant: Erayga "P" | Martech Zone
Rant: Erayga "P"
Arbaco, Juun 2, 2014 Douglas Karr
Suuqgeyaasha waaweyni way ku raaxaystaan ​​ka hadalka Ku noqo on Investment. Shalay, waxaan kaqeyb galay kulan aan laqaatay shirkad guryaha dhista oo caqabado qaar kala kulantay istiraatiijiyadooda webka. Bogooda warbixineed ma wadin jihooyin aad u tiro badan waxayna ku qarashgareynayeen xoogaa lacag ah dhowr barnaamijyo dibadeed ah si ay ugu kexeeyaan dariiqyada meerahooda iibka. Dhibaatada aan aqoonsanay waxay ahayd inay bixinayeen dhamaan shirkadahaas si ay ula tartamaan khadka tooska ah.
Dib ugu noqoshada sicirka beddelka hoggaanka iyo dakhliga halkii u dhow, waxaan ka caawinnay aragtida nooca saameynta guud ee istiraatiijiyadda suuqgeynta ee internetka ay sameyn karto si loo wado qiimaha halkii hoggaamiye hoos loo dhigo, la kordhiyo tirada hoggaamiyeyaasha, iyo in la yareeyo ku tiirsanaantooda dhinacyada saddexaad. Maaha geedi socod habeennimo - waxay u baahan tahay dardar iyo istiraatiijiyad waqti-dheer ah oo ku-meel-gaadh looga dhigo. Taasi waxay umuuqataa inay inta badan caqabad ku noqoto shirkadaha la qabatimay ilaha hoggaanka saddexaad.
Aad ayey ugu farxeen kulanka waxaanan dhawaan dabagal ku sameyn doonaa talaabooyinka xiga. Markii aan la hadlayey urur ku saabsan arrintaas, in kastoo, aan iscaawin kari waayey laakiin aan u malaynayay in dhammaan hadalkan maalgashiga, ku soo noqoshada maalgashiga, kharashaadka suuqgeynta, kharashaadka xayeysiinta… dhammaantood waxay ku saleeyaan hal istiraatiijiyad. Si loo horumariyo miisaaniyadda suuqgeynta, waa inaad kordhisaa faa'iidada shirkad.
Markii dambe, waxaan ka akhrinayay wadahadal bulsho oo ku saabsan sida shirkaduhu kaliya u daneeyaan faa'iidada. Ma aqbalayo gabi ahaanba. 99% ka mid ah shirkadaha aan la shaqeynay - laga bilaabo shirkadaha waaweyn ee dadweynaha ilaa kuwa ugu yar yar ee bilowga ah - waxay cabireen faa'iido laakiin dhif iyo naadir bay ahayd qiyaastooda guusha. Xaqiiqdii, helitaanka macmiilka, haynta macmiilka, wareejinta shaqaalaha, maamulka, kalsoonida, iyo saamiga suuqa ayaa had iyo jeer ahaa kuwa ugu sareeya radar sida aan uga hadalnay caawinta shirkadaha. Si daacadnimo ah weligay kamay jirin shirkad ii soo dhowaata oo dhahda taas waxaan u baahanahay inaan kordhino macaashka - sidee u caawin kartaa?
Taasi waxay tiri, waa wax laga xumaado in erayga "P" uu noqdo mid la waswaasiyo halkii laga dhawaaqi lahaa buurta ugu dheer. Faa'iidadu maaha mid la mid ah hunguriga. Faa'iidooyinka ayaa ah waxa shirkadaha u suurta geliya inay shaqaaleeyaan, u suurtageliyaan shirkadaha inay koraan, u saamaxdaan shirkadaha inay maalgashi ku sameeyaan cilmi baarista iyo horumarka, iyo - ugu dambeyntiina - faa iidooyinka ayaa ah waxa shirkadaha laga canshuuro. Si kale haddii loo dhigo, mar kasta oo ay sare u kacdo faa iidada shirkaddu, way ka sii fiicantahay dhaqaalaheenna guud. Faa'iidada sare waxay soo saartaa dakhliyada canshuuraha ee sare si loo taageero muwaadiniinteenna ugu saboolsan. Faa'iidooyinka sare waxay u saamaxayaan shirkadaha aniga oo kale ah inay koraan oo ay u saamaxaan fursad horumar iyo shaqo kuwa raadinaya shaqo ama doonaya inay horumar sameeyaan.
Bakhaylnimadu waa marka shirkaduhu hodantinimada hantida ay ka qaadaan shaqaalaha, macaamiisha, iyo bulshada. Shirkadaha aadka u macaashka badan ee aan ogahay waxay si fiican u siiyaan shaqaalahooda, waxay sii wadaan inay sare u qaadaan khibrada macaamiishooda, oo ay maalgashadaan wax badana bulshada ugu deeqaan. Oo waxay ku sameeyaan iyada oo loo marayo ikhtiyaari ikhtiyaari ikhtiyaari ah, oo aan qaadan.
Uma maleynayo inay tahay inaan ka aamusno suuqgeynta iyo saameynta ay ku leedahay faa'iidada. Waxaan u maleynayaa inay tahay inaan u dabaaldegno faa'iidada… weyn, fiican. Mana ahan inaan raadino siyaabo aan ku yareyn karno canshuuraha iyo nidaaminta. Waa wax iska caabin ah.
Waa tan si loo kordhiyo faa'iidooyinkaaga iyo faa'iidadaada faa iidada ah!
Tags: kharashka xayeysiintashirkadahabakhaylimaal-gashigamarketingkharashaadka suuq geyntafaa'iidoku soo noqo maalgashiga
13-ka Xeeladaha Suuqgeynta Macluumaadka B2B ee ugu caansan
24 Talooyinka Suuqgeynta Inbound Pro ee Suuq-geynta Waxyaabaha Ecommerce